Cameroon - Cimilada Bulshada: Maxaabiista, Michele Ndoki ayaa ugu yeeraya Cameroon inay tallaabo qaadaan - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY » Cameroun – Climat Social: Depuis la prison, Me Michèle Ndoki appelle les camerounais à l’action
Cameroon - Cimilada Bulshada: Maxaabiista, Michèle Ndoki ayaa ugu yeeraya Cameroon inay tallaabo qaadaan
Warqad uu daabacay wargeyska maalin daabacaadda ee 15 April 2019, Madaxweyne ku-xigeenka ee dhaqdhaqaaqa Dumarka Fulinta ee dhalashadii labaad ee Cameroon, ka codsaday Cameroon inay codkooda kuwa dalbaday in la sii daayo ka mid ah madaxda iyo dhaqdhaqaaqayaasha ku dar ee RCM oo la xiray.
«Dadka reer kaligii taliye ee xisbiga ogahay hal luqad oo kaliya, karbaash ah. Truncheons weli guud ahaan aan kala sooc lahayn loo qaybiyey, reer darbo koorso ama bastoolad rasaas doorbidayaa at kala duwan oo ku dhow ama cutub, stroke Jarnac kala duwan, dhaqanka kooxaha qaaska ah aadanaha in geesinimada ma ceejiya. Sida hogaamiyayaasha mucaaradka, iyagu waa sayid of xogsiin cadhaysan oo denunciation, virtuosos run waayo, kii tiradaasi jiro hadal ah ayaa si qarsoodi ah. figeeyo ka dhanka ah qoryaha, midhuu xogsiin ah ka gees ah dandelions ubax xabaalo oo kale waa in xaqiiqda khilaafka weligeed ah ee dherigii dhoobo ah ka gees ah dheriga birta".
Waxay la socotaa xigashadan Mongo Beti laga soo bilaabo shaqada, "Qorraxda badani waxay dishaa jacayl", Taasi Aniga Michelle Ndoki wuxuu bilaabaa warqad. Qareenka, sanado ka dib 20, ereyada Mongo Beti «waa warar kulul".
«Inkasta oo aan daawado, isku dar ah oo murugo iyo xaasidnimo ma hortago oo farxad u daacad ah aan quruunta walaashiis, Algeria iyo Sudan kuwaas oo u muqato taariikhda, su'aasha noo qaylinayaan, na silciso, Maxaa inoo sidaas ma seegtay?Waxay la yaabtay.
«Ilaah iyo kuwii noo sheeg yar oo waxaynu og nahay in madaxda kale ee aan kaamil: waxaan leenahay laakin oversized iyo sidoo kale marar badan shaki iyo kibirka na indha. Si kastaba ha ahaatee, tallaabooyinka in halkan nagu soo hor kacay, oo in kasta oo ay nafteena 147 ku dhowaad oo aan waxba galabsan (saaxiibadaa, dadka taabacsan, taageerayaasha, laakiin sidoo kale jidka maraya, by, gaar ahaan siddo), tallaabooyinka lagu Hanuuniyey rabitaan aan labaweji lahayn inay si fiican, ka badan in barakaysan Land waxaan jeclahay"Ayuu yiri madaxweyne kuxigeenka guddiga fulinta haweenka MRC.
«Waxaan jeclahay jacayl ah in duuban ugu khushuucsan carruurtiisa, waana jidhkeenna, dhiigayaga. Weli, waxaa naga xoog badan, waa in aan dubbe, waxaan sii wadi in la sheego in waa ha noo kaxayn in Cameroon inaan u qalano Yen Ekombo'a mwaye wa Ndutu e titi lahayn, dalkan of Light, halkaas oo Dhibaato ma jirtoWaxay sii socotaa.
Ka mid ah kuwa la xiray, waxay sheegaysaa kiiska Roger, u imow si aad u bedesho nalalka Albert Dzongang 28 Janaayo 2019, oo aan dib ugu noqon karin guriga ka dib markii uu soo dhameystay xafiiska sababtoo ah guriga macmiilkiisa ayaa ku wareegsanaa.
"Roger ma ahan tan iyo tan; wuxuu ka gudbay koronto-yaqaan, ninkeyga iyo aabihiis oo isku dayey in ay horay u sii wataan waxyeelo badan oo nolosha ah, oo laga shakisan yahay, kadibna lagu soo eedeeyay cadaawada ka dhanka ah reerka, kacdoonka, fallaagada, iwm. Kii u suurtageliyey inuu noqdo nin sharaf leh, oo si daacad ah u kasbaday noloshiisa iyo kuwa ku tiirsan, hadda waa inuu ku tiirsanaadaa deeqsinimada shisheeyaha si naftiisa u quudiyo. Waxaa lagu xiray Kondengui dhowr boqol oo kilomitir qoyskiisa".
Roger ma ahan midka kaliya, waxaa sidoo kale xitaa 150 ku xiran yihiin in ka badan laba bilood xabsiga dhexe ee Kondengui oo aan waxba samayn. "Waxay yihiin dhibbanayaal, maaha kaligii taliyihii iyo addoommadiisa, laakiin ka mid ah baaxaddayada. Waa in la joojiyaa. Ka hor madmadow, paranoia iyo fulaynimada ayaa nagu garaacday xeeladaha dagaalka, ha iftiinka ku haayo. Dabcan habeenka oo dhan marwalba ma dhicin si aan u sii wadin qorraxda, laakiin sideed u jeceshahay, haddii, Carruurtayda My Earth, aad adkaato inaad ka tagto daaqadahaaga? Dibedda waxaa jiri kara khatar, laakiin banaanka waa meesha aan ka helno noloshaWaxay tiri.
Meel kasta oo kale waa waddamo ka soo baxaya oo la nadiifiyay oo uur leh rajo iyo rajo leh. Ficilku maaha mid ka mid ah dunidan, laakiin Wanaagsan iyo quruxsan, haa. Waxay u gudbaan qoyskooda 150 ee kaligii taliyaha.
Si taas loo gaaro, waa in aan u dhaqanno oo aan wacnaa Cameroon à tallaabo. "Adigu waad kala duwanaan doontaa iyaga, anaga, annaga. Waa ku filan tahay inaad ku biirto codadkaaga kuwa kuwa sheeganaya xoriyadooda. Aanu dalbanayno sii deyntooda kali taliyihii iyo shaqaalihiisii, garsoorayaasha ka hor intaanay u muuqan, loo gudbiyo Xeer-ilaaliyaha Guud oo ay tahay in ay helaan sababaha dacwad-qaadista. Aynu keenno iftiinka, u dir gurigaWuxuu dhahaa qareenka.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/04/16/cameroun-climat-social-depuis-la-prison-me-michele-ndoki-appelle-les-camerounais-a-laction/
Damaashaadka Midnimada Qaran: Waqtiga Abaalmarinta